Agorapulse: Yako Yakareruka, Yakabatana Inbox YeSocial Media Management | Martech Zone
Anopfuura makore gumi apfuura, paSocial Media Kushambadzira Nyika, ndakasangana neanoshamisa mutsa uye anopenya Emeric Ernoult - muvambi uye CEO we Agorapulse. Musika weSocial Media manejimendi maturusi akazara. Ichokwadi. Asi Agorapulse inobata vezvenhau sezvo makambani anoda kuti ive ... maitiro.
Izvo zvave kuomarara uye kuomarara kusarudza chishandiso chakakodzera (kana maturusi) pane zvatinoda. Kune chero munhu (seni) anoedza kubata akawanda maakaundi akarohwa uye akaita ruzha neIPAMP uye nzvimbo dzekutengesa, Agorapulse anotyora ruzha. Kuita kuti zvinyanye, vatengesi vezvishandiso vanochinja zvipo zvavo nemitengo yemitengo zvakanyanya, kazhinji vachisimudza mitengo kana kutama kubva pamutengo unozvishandira wega kusvika pamitengo yepamusoro yebhizimusi.
Agorapulse chishandiso cheSocial Media manejimendi chandinotenda kuti chinozviwana nemazvo. Ndicho chikonzero nei ndichiishandisa mazuva ese uye ndichikurudzira kune wese mutengi…
Hapasisinazve Inbox nyonganiso. Nguva imwe neimwe pandinopinda mairi ndinowana maonero akajeka ebhokisi rega rega rekero nechiratidzo chehuwandu hwezvinhu zvakandimirira kuti ndiongorore.
Patakaenda kuAgorapulse uye isu takawana poindi patakange tine inbox iyo yaitora yakananga mameseji, iyo yakabata iyo yekuteerera, uye isu takakwanisa kudhonza mumashoko ekushambadzira munzvimbo imwechete, taigona kuishandisa sezvataizoshandisa chero imwe inbox mune yedu tikiti system.
Iyo Yakabatana Yemagariro Inbox Yakagadzirirwa Kuchengetedza Nguva
Agorapulse yakaronga yayo Yakabatana Yemagariro Inbox kukubatsira kuti uwane Inbox Zero nekukurumidza uye nyore. Ese meseji nyowani, makomendi, uye kutaurwa, zveFacebook, Twitter, uye Instagram, zvinoratidzwa nekusarudzika mu kuongorora Sefa yekukubatsira iwe kutarisa pazvinhu zvako zvazvino uye ivo vanogarapo kusvikira iwe wadzokorora imwe neimwe kana kuongorora zvese nekukanya kamwe bhatani. Dzese hurukuro dzako dzinowira munzvimbo imwechete kwaunogona kuronga, kubata, kupa, uye kunyora zvese kutaurirana nesangano rako.
Influencers - Ona zita romutumi uye chimiro pane zvese kutaurwa. Wedzera zvinyorwa zvakaringana kupatsanura vashandisi vako uye zvinyorwa zvemukati kuti upe mamiriro kuchikwata chako.
Facebook Ad uye Instagram Ad kutaura - Synchronize ako ese ekushambadzira makomendi. Gamuchirai stats nekukurumidza sekuda kwamunoita iwo muchirongwa.
Zvishandiso zveInbox - Mabhokisi eInbox, mhinduro dzakachengetedzwa, zviito zvakawandisa, kudzvanya kamwe chete, kupihwa timu - tora iwo ese, zvisinei kuti unosarudza hurongwa hupi.
Kutanga Yako Yemahara Agorapulse Akaunti
Nzwisisa Yemagariro Midhiya Kuburitsa
Agorapulse inogonesa timu yako kukwidzirisa, kushandira pamwe, uye kuronga ako enhau midhiya kurongedza, kubvumidza, uye kuburitsa zvakatumirwa uko kwavanogona kuwana kuita kwakanyanya kuita pasocial network.
Kubatana Kwechikwata - Goverana zvinyorwa, tarisa chiito zvinhu, uye ona kuti ndiani ari kutaura-mune chaiyo-nguva.
Yakagovaniswa Karenda - Vashandisi vanogona kugamuchira, kuramba, kana kupa mhinduro pane zvakatumirwa. Iwe nevatengi vako munogona zvakare kuona hwese hwenyu hwakarongwa, hwakaburitswa, -kutendera, uye kuramba zvirimo.
Yemagariro Midhiya Kuburitsa Queues - Gadzira mitsara yemitsetse kuronga zvinyorwa zvehukama zvine chekuita uye nemishandirapamwe. Ita shuwa iwe uine hombe chiyero chemukati mukati mevhiki, zvese nekutarisa.
Social media kuongorora
Teerera mukati mezvenhau hurukuro pamusoro pechako, makwikwi, uye nzvimbo. Pindura nekukurumidza kune vatendeuka nekukurumidza.
firita - Tarisa pane zvakakosha neYouTube uye Twitter yekutsvaga paramita. Kanda pasi pane zvakatarwa kuburikidza nevashandisi veboolean kuti uwane chaizvo zvaunoda.
Ronga - Nyora zano rako remukati nekunyora zvinhu, senge zvakakosha zvinyorwa, chiitiko chemukwikwidzi, uye mhinduro yevatengi kuitira nyore kutora uye kupindura.
Discover - Gara pamusoro pevatengi, tarisiro, uye mikana mitsva yebhizinesi nyowani - pasina miganho.
Yemagariro Media Metrics uye Kuzivisa
Tarisa izvo zvemukati peforms zvakanak, kupi, uye riini. Tevedza maitiro uye nekuita kwako kwechikwata uye uwane kurudziro pane yako inotevera yemagariro zvemukati danho nehunhu hwekuita data.
Focus - Tsvaga iyo yakasikwa inosvika, yakabhadharwa kusvika, yakazara kusvika, kudzvanya, uye nhamba yevanoshandisa vashandisi vezvako zvemukati.
Ziva - Ona kuti vangani vateveri vaunowana kana kurasikirwa navo, nguva yako yemukati inoonekwa, nekubatana nezvako zvemukati.
Nhamba - Nyore tarisa nguva dzekupindura yenhengo yega yega yechikwata kuti uone kuti zvese zvinouya nhaurwa dzekutaurirana zvinobatwa nekukurumidza. Teedzera mhinduro uye makomendi akaongororwa, akavanzwa, uye abviswa.
Simba Mishumo - Gadzira mishumo yetsika zvichibva pamametric uye madheti emazuva aunosarudza, pane akawanda profiles eruzhinji. Iwe unogona zvakare kuenzanisa nguva yenguva uye kuseta otomatiki akarongwa mishumo kune yako email.
Rudzi urwu rwe data runoita kuti zvive nyore kuratidza iro basa rakaitwa nemunhu anotarisira yega account. Kubatanidza kukuru kwemasangano kana maneja enharaunda akazvimiririra.
Yemagariro Media Management Platform Kune MaAgency
Tora iyo yekupedzisira-mu-imwe agency yemagariro midhiya manejimendi chishandiso-mutengo wemari yekukura zvikwata.
Reporting - Gadzira zvirinyore uye ugovane zviongororwo uye zvakadzika zvakadzika mune zvemukati zvevatengi vako, kubatanidzwa, uye kukura Wana matani esarudzo yekugadzirisa.
Kugutsikana Kwemukati - Govera iyo inoshamisa yakarongedzwa mvumo maitiro. Shandisa imwe karenda kune akawanda manzanga profiles sekutendera kwako chirongwa. Sezvo iwe paunowedzera vatengi, iwe unogona kuwedzera makarenda.
Zvimiro - Admin, mupepeti, modhaira, muenzi-ipa basa kune vatengi uye vashandi vatsva. Basa rega rega rinosiyana mukuwana kwaro kutumira, kupindura, uye kushuma.
Yemagariro Media Management Mobile App
Zvakakosha kuti ndine nharembozha yekushandisa maakaundi enhau ezvekufambisa, uye iyo Agorapulse mobile app ndizvo zvese zvandinoda! Ini ndinogona kubata ese angu ekuburitsa zvakapusa uye nyore kubva kuApp's Inbox Inbox!
kuburitsa: Ini ndiri vaviri anofarira mushandisi, fan, uye mubatanidzwa we Agorapulse! Ndiri kushandisa yangu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: agency social media platformagorapulsebufferemeric ernoultFacebookfacebook makwikwifacebook peji vakwikwidzifacebook timeline makwikwiInstagramLinkedInyemagariro midhiya mvumo maitirozvemagariro midhiya zvemukati maitiromagariro enhau manejimendizvemagariro midhiya manejimendi kune vamiririripasocial media kushambadzira nyikamagariro enhaumagariro enhausocial media statisticsTwitter
Ndakaedza demo uye ndanyadziswa neinotevera:
1. Kusakwanisa kuronga zvirevo zvinoitika zvekare.
2. Hapana kugona kusevha zvinyorwa zvekunyora
3. Dhonza kubva pane zvakapfuura zvinyorwa uye shandisa zvakare.
Wakambotaura nemumwe munhu kuAgorapulse nezve yavo "yekuburitsa chishandiso" kukwidziridzwa? Ndiri kuyedza kuona kana tichida kubata kana kwete. Pane here mepu yemepu yezvinhu zvaunogona kuona kumwe kunhu?
Mhoro Jp. # 1 haifanire kuzadzikiswa sezvo kunenge kuri kutyora kwenzvimbo yemagariro. Twitter, Facebook uye LinkedIn hazvibvumire zvinodzokororwa posvo zvinyorwa. # 2 chinhu chinonakidza uye chinoita senge zano rakakura. # 3 inogona kunge iri nyaya ne # 1. Ini ndichatumira kuonana kwangu kuAgorapulse tambo iyi kuti nditaure nezvayo.
Hei Jp, yakanaka mhinduro! Ndatenda nekutora nguva yekupindura Doug 🙂
Chaizvoizvo Jp, iwe wakanyatsotaura, pane zvimwe zvakakosha zvisipo mune yedu yekushambadzira chishandiso. Nhau dzakanaka ndedzekuti: isu takatanga kuvashandira mwedzi miviri yapfuura uye ivo vari kuuya pamwe, pamwe kutanga kwaGunyana.
- Mutsetse weakaundi yega yega, kwaunogona kumisa mutsara zvakafanana zvakapetwa (kana chiri chegirini gara, chokwadika, kana zvisiri, zvine musoro chii 😉
- Yevashandisi inoshamwaridzika karenda yekutarisa (vashandisi vedu vanofarira iwo maonero ezvo zvemukati).
Iyo, zvishoma gare gare, isu tichawedzera iyo yakawanda account kudhinda (shambadzira kune ese kana severakl maakaunzi kamwechete). Ipapo, isu tichawedzera LinkedIn, ipapo Instagram, pamwe pamwe G + (ndichiri kushamisika nezve iyo).
Nekudaro, zvakakodzera kumirira mumwe mwedzi, kunyanya sezvo tichizenge tichidzosera nharembozha yedu panguva iyoyo (kuzviisa kuchitoro cheapp nhasi nhasi mushure megore rekuvandudza 🙂